China Colour Coated Corrugated Sheet prepainted Roof Sheet orinasa sy mpanamboatra | Mandresy
Takelaka mitafo vita amin'ny lamba mifono loko miendrika ravin-tampon-trano
Taratasy vita amin'ny roofony mifono loko (takelaka vita amin'ny vy mihosin-kofehy) vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy, ampiasaina amin'ny vy na vy aluzinc ho substrate. Aorian'ny fitsaboana mialoha (fitsaboana simika simika ary fitsaboana fanovana simika), ny sosona dia rakotra sosona na sosona maromaro, amin'ny alàlan'ny fanabeazana sy fanasitranana, avy eo lasa vokatra vita.
Takelaka an-tampon'ny lamba mifono loko (Namboarina Takelaka vy mitafo) ny akora dia coil vy vita miloko, mampiasa vy metaly na vy aluzinc ho substrate. Aorian'ny fitsaboana mialoha (fitsaboana simika simika ary fitsaboana fanovana simika), ny sosona dia rakotra sosona na sosona maromaro, amin'ny alàlan'ny fanabeazana sy fanasitranana, avy eo lasa vokatra vita.
Ny sarimihetsika loko azontsika atao 10-30microns. Arakaraka ny maha ambony ny sarimihetsika fandokoana no mihalava kokoa ny androm-piainan'ny loko. Ny fitaovana fandokoana dia PE, SMP, HDP, PVDF, ects.
hateviny 0.12mm-3mm, araka ny fangatahan'ny mpanjifa
sakany Alohan'ny ahodin-drano: 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm 762mm
Aorian'ny famolavolana: 360mm-1200mm, azonao atao ny misafidy sary mitaingina tafo avy ao amin'ny tranonkalanay.
halavan'ny 1.8- 5.8 metatra na toy ny fangatahan'ny mpanjifa
Malagasy GBT2518-2008, ASTM A653, JIS G3302, EN 10142, sns
Kilasy ara-materialy DX51D, SGCC, G300, G550, SGCH570
Zinc coating Z30-Z275g
Coating AZ Z30-Z180g
Fangaro Galvalume 55% aliminioma 43,4% zinc, silika 1,6%
Fitsaboana ambonin'ny tany Passivation na Chromated, Skin Pass, solika na Unoiled, na fanontana Antifinger
Ny lanjan'ny bundle 3-6 taonina na takian'ny mpanjifa
Karazan-karazany isafidianan'ny mpanjifa.
Raha te hanontany dia mila fanazavana eto ambany:
1.Ny sakan'ny ravin-taratasy aorian'ny fanitso.
2.Tebaky ny ravina
3. haavon'ny onja
Fananganana, fitaovam-panorenana, fitaovana tafo, firafitra vy, fitaovana ao an-trano, kaontenera, tontonana sandwich.
1. fonosana mora, ib bundle ihany.
Fonosana fanondranana azo zahana 2.Standard: 3 sosona fonosana, sarimihetsika plastika amin'ny sosona voalohany, ny taratasy faharoa dia taratasy Kraft Ny sosona fahatelo dia ravina galvanisika + fonosana fonosana + voaaro ny zorony.
Fampidinana sy fandefasana
1.Mandefasa amin'ny kaontenera
2.Loading'ny fandefasana betsaka
Teo aloha: Takelaka vy miolaka mangatsiaka misy habe feno
Manaraka: Taratasy vy mitafo fanitso ho an'ny taila vy eo an-tampon'ny vy
Sheet vy mangatsiaka mangatsiaka 0.5mm
Takelaka vy vita amin'ny karbaona mangatsiaka
Coil Sheet Rolled Steel mangatsiaka
Takelaka vy mifono loko
Takelaka vy miloko
Takelaka vy mitafo
G275 vy nandrisika Sheet